Ndeipi inishuwarenzi yaunoda kune yako ecommerce? | ECommerce nhau
Ndeipi inishuwarenzi yaunoda kune yako ecommerce?
Jose Ignacio | | eCommerce, Chengetedzo
Iwo manejimendi mune ecommerce inoda akateedzana einishuwarenzi kuchengetedza zvido zveichi chiitiko chehunyanzvi mu online fomati. Iko chiri chinhu chakakosha kwazvo kuti iwe ugone kuve wakakwana kuda kuchengetedza, kwete zvako zvehunyanzvi zvido chete, asiwo zviwanikwa zvako nemidziyo yeIT. Iko kwakanyanya kukosha chinhu ndechekuti zvese zvinoshanda nekugadzirisa kwakakwana.
Kubva pane ino mamiriro ezvinhu, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti inishuwarenzi yezvitoro zvepamhepo zvinowanzo kuve inishuwarenzi yekutengesa ine chinangwa chikuru kuchengetedza zvese nzvimbo kana imba yekuchengetera, pamwe nemidziyo kana stock pamberi penjodzi dzakasiyana (moto, humbavha, kukuvara kwemagetsi, mvura, nezvimwewo) uye mutoro wevose zviri zviviri nzvimbo uye bhizinesi pacharo.
Chero zvazvingaitika, kana bhizinesi rako repamhepo risina nzvimbo nekuti iwe unopa masevhisi uye hautengese zvigadzirwa, chinhu chinowanzoitika kuita kondirakiti inishuwarenzi yemutero inovhara chikwereti cheveruzhinji chekushandisa, mushandirwi uye zvigadzirwa uye kuzvidzivirira zviri pamutemo izvi zvinodaro.
Kana iwe uine online chitoro kana wafunga nezve kuimisa, iyi ruzivo yakakosha, Chero zvazvingava, ichakubatsira iwe isa chitoro chako painternet nenzira iri nyore uye zvakachengeteka sezvinobvira pane zvaunofarira
1 Ecommerce inishuwarenzi: kuchengetedzwa kwemidziyo
3 Kuchengetedza mahofisi
4 Mhosva yehurumende
5 Inishuwarenzi yevashandi
6 Dzakakwana zvirongwa zvevashandi
Ecommerce inishuwarenzi: kuchengetedzwa kwemidziyo
Mutengo weinishuwarenzi wechitoro chako chepamhepo kana bhizinesi zvinoenderana zvakanyanya nekuti iwe unochengetedza nzvimbo kana kwete, kana chete inishuwarenzi yemunhu mutoro. Imwe yeinonyanya kudiwa ndiyo inonzi inishuwarenzi yekutenga, inova mutemo kune makambani akazvipira mukutengesa zvigadzirwa zvakapedzwa zvakananga kumutengi.
Ichi chigadzirwa chine yakashandurwa kufukidzwa kune iyi mhando yekuseta. Iko kuvimbiswa kwemazano ehunyanzvi pamusoro pehunhu uye kuchengetedzeka uye kuwedzerwa kwechikwereti chevagari, pakati pevamwe, kupedzisa chengetedzo iwe neako bhizinesi reInternet raunoda.
Imwe yemaitiro anodikanwa erudzi urwu rwebhizinesi ndeye iyo kufambisa kwepasi. Mupfungwa yekuti zvinobatsira kuva nedziviriro yakakwana kwazvo, kunyangwe iwe uri anotakura zvinhu, broker, mutakuri kana murongi wezvekuratidzira kwehunyanzvi. Saizvozvo, inopa mwero umo inonyanya kunangidzirwa kusangana nezvinodiwa nevaridzi vezvinhu. Iyi bumbiro inosungira vane inishuwarenzi kuti vazivise imwe neimwe yenzendo dzakaitwa, ichisimbisa mwero weumwe neumwe wavo zvichibva pane zvakatengeswa zvakachengetedzwa neichi chigadzirwa chemari.
Kune rimwe divi, iri bhenefiti yakakosha iripowo mukati meichi chipo. Iko vashandisi, ma freelancers uye maSMEs vanogona kunyorera akasiyana marudzi emamwe marongero ekuchengetedza kushanda kwakakodzera kwavo makomputa kana michina yemakomputa Kubudikidza nezvigadzirwa zvinosanganisira kufukidza kwekugadzirisa, kuisa uye kugadzirisa makomputa, kurasikirwa kwedata uye kukuvara kwemuviri kuzvinhu zvaro uye, izvo zvinototarisirwa kumalaptop; kunyange hazvo, zvakadaro, vanhu vamwe nevamwe vanogona kugara vachitsvaga kubhadhara imba inishuwarenzi inosanganisira kufukidza kugadzirisa zvinokwanisika kushomeka mukushandisa kwemakomputa, pamwe nekombuta yekubatsira sevhisi.
Imwe misiyano iyo vashandisi vanokwanisa zvakare kunyorera ndiwo marongero ekuchengetedza michina yemagetsi kune ese mashandisirwo ehunyanzvi uye epachivande ayo akaisirwa pamba kana mumahofisi uye ayo anoitirwa vanhu vane chido chekuvapa inishuwarenzi, zvese zvehunyanzvi uye zvakavanzika kushandiswa. Rudzi rweinishuwarenzi kazhinji runovhara maseketi mapfupi uye zvimwe zvinokonzeresa magetsi (kuwandisa kwemagetsi, kupinza kana kusaputira kwakashata), kuremara kwemafuta, kutadza kwegungano uye kusashanda zvakanaka, pakati pezvakanyanya kuitika.
Inovharawo zvekunze zvinokuvadza senge moto, kuputika, mheni yakananga, kuba uye zvimwe zviitiko zvechisikigo, pakati pezvimwe zvinoitika. Kuburikidza navo, isu tinotanga kubva kuvimbiso yekutanga inokanganisa kukuvara kwemidziyo uye zvimwe zvekusarudzika zvinoreva kukuvara kunogona kukonzerwa nevatakuri vekunze uye nekuwedzera kwemutengo webasa. Mutengo werudzi urwu rweinishuwarenzi unoverengerwa zvichienderana nehunhu hwemidziyo yemagetsi, zera rayo uye mashandisiro anoita mukati memba, hofisi kana hofisi yehunyanzvi.
Nekugadziriswa kwayo, zvinokurudzirwa kuti uzive mutemo waunoda kubvumirana, nekuti unogona kusanganisira kufukidza iyo iyo muridzi wehofisi haifungi nezvekupa inishuwarenzi, pamwe nekuti haichidi kana nekuti haina kubhadhara mari, saka vamwe veinishuwarenzi vanosarudza kuvhura "à la carte" inishuwarenzi pamusika, yakanyanya kugadzirirwa zvido zvemuridzi wega wega.
Inishuwarenzi inofanirwa kutsvaga inochengetedza hunhu hwehofisi yega yega nezvivimbiso, saka semuenzaniso, izvo zviri pasi pevhu zvinofanirwa kusanganisira, pakati pezviitiko, izvo zvinobva kunjodzi dzemamiriro ekunze (mafashama, kuputika kwepombi, nezvimwewo). haigone kukanganisa nzvimbo inowanikwa muzvirimwa zvinoda zvimwe zvinodiwa.
Nemasikirwo avo, iri kirasi remitemo rakanyanya kukodzera kune nyanzvi kana vanozvishandira vashandi vane kukurumidza kudiwa kwekuchengetedza nzvimbo yavo uye zvese zvirimo zvinochengetwa, nekudaro vanogona zvakare kuwedzerwa kumahofisi ehunyanzvi.
Makambani mazhinji einishuwarenzi akagadzira inishuwarenzi yemutoro, inishuwarenzi yakazara kwazvo nekuda kwekusiyana uye hupamhi hwekuvhara kwayo uye inochinjika kuti ienderane nezvinodiwa nekambani imwe neimwe. Iyi CR Inishuwarenzi inovimbisa yakanyanya kudzivirirwa kubva kune yechitatu-bato zvirevo mune chero chikamu, kusanganisira nyanzvi, yekuvaraidza uye yekuzorora zviitiko.
Mune pfungwa iyi, the General Civil Liability Inishuwarenzi Ichabvumidza kambani yako kuenderera mberi iine hupfumi mushure mekutambura zvirevo kubva kune vechitatu mapato nezve chikwereti chakatorwa kubva muchiitiko, zvigadzirwa kana basa rakaitwa. Uye zvakare, iyo inokupa iwe yakafararira renji yezvivimbiso kuchinjika kune zvaunoda.
Nechinangwa chekuti mamaneja ayo haakwanise kudzivirira mukana wekutora chero danho rinoisa panjodzi zvinhu zvebhizinesi kana kukonzera kurasikirwa kune wechitatu mapato. Nechikonzero ichi, zvinonyanya kufadza kuti mukati mekambani yedhijitari mutemo wezviitiko izvi unogona kuitiswa. Kuitirwa kuitirwa maneja nevatariri vanopa chengetedzo kubva mukukanganisa kune vechitatu mapato.
Pakati pezvivharo zvikuru zvinopihwa neichi chigadzirwa cheinishuwarenzi pane zvimwe zvakakosha seizvo zvatiri kuzokuratidza pazasi:
Mhosva yehukama kune vanhu vane inishuwarenzi
Kudzivirirwa mukutaura kwekusvibisa
Kugadziriswa kwechimiro cheveruzhinji
Faindi yekutonga nezvirango
Mhosva yehurumende pane chikamu chemuvambi
Nepo kune rimwe divi, iyo inonzi Multi-ngozi kambani inishuwarenzi inogoneswa uye yakagadzirirwa kuti pasava nechinoitika chinokonzera misa bhizinesi rako. Chero kambani inoratidzirwa kune dzimwe njodzi idzo zviri nyore kuti uzive.
Kana iwe uine chero mibvunzo, tisiirei nhamba yako yefoni uye mumwe wevanopa mazano vedu achakubata kuti akupe ruzivo rwese rwaunoda.
Iyi ndiyo mimwe yemamiriro ezvinhu akakosha ane huwandu hwakawanda hwenjodzi hwakagadzirwa nemakambani einishuwarenzi, pakati pawo anotevera kumira.
Kutsiva mafomu uye mafaera
Kubira kana kuba
Kunyangwe mumhando iyi yezvigadzirwa zveinishuwarenzi zvakajairika kuti vapihwe mumwe nemumwe (inishuwarenzi yekurega basa, muripo wezuva nezuva kana chirwere), kune mukana zvakare unopihwa nemamwe makambani einishuwarenzi anovapa pamwe chete kune vatengi vavo kuburikidza ne "rongedza”Inishuwarenzi mairi kufukidza zvese zvinoitika zvambotaurwa. Kunyangwe yavo yepasi rose yakakwira, kumwe kuponesa kunogona kuwanikwa pane kana vakabvumidzwa mumwe neumwe, vari vega, kunyangwe kuburikidza nevakawanda veinishuwarenzi.
Iri zano harisati raitwa muchipo chazvino, asi unogona kugara uchisarudza yemhando yeinishuwarenzi inosangana nehunhu (kana hwakafanana) uye ihwo hunowanikwa vanogamuchira vanozvishandira, avo kune rimwe divi ndivo vane kushomeka kukuru Ivo vanofanirwa kugashira rudzi urwu rwezvibatsiro zvemagariro uye, nekudaro, vane hanya zvakanyanya kuti vagamuchire aya ehutano neesocial services.
Dzakakwana zvirongwa zvevashandi
Imwe mhinduro inowanikwa kune vanozvishandira kuchengetedza zvido zvavo iri kuburikidza nehurongwa hwakazara hwakanangana nevanhu vanozvishandira, iyo yavanogona kubhadhara nayo mari inorasika kana paitika zororo rekurwara. Inogona zvakare kubvumidzwa kuverengera iyo zororo rekurwara kana tsaona, uye nekudaro kudzikisa mari inoenderana neiyi, vanozvishandira vanowana muripo panguva yavanogara vasina kushanda. Imwe yemabhenefiti ekuenda kune ino inishuwarenzi chikumbiro ndechekuti iwe unogona kusarudza sarudzo chirongwa chekurapa chekurapa, pamwe nekuvimbiswa kwekuchengetwa muchipatara chero chikonzero.
Nekuhaya kwako iwe unobvisa njodzi yekusawana mari yako yenguva dzose nekuda kwezororo rekurwara, uye nekudaro chengetedza zvinhu zvako uye zvemhuri yako yese nekuzadza iyo Social Security mari. Izvo zvinobvumidzawo kuwana muripo wezuva nezuva unogona kutenderera pakati peanenge makumi maviri nemakumi mashanu emauro, pamwe nekuwana masevhisi matsva kana mabhenefiti ekurapa pasina imwezve mutengo kune vanoibata uye, mune zvimwe zvikumbiro zvakakwana, kunyangwe mukana wekugamuchira nhungamiro yepamutemo yefoni. sevhisi uye nemahara zvehungwaru kurapwa. Mune izvo zvinoumbwa seinishuwarenzi mhinduro kumakambani epamhepo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Ndeipi inishuwarenzi yaunoda kune yako ecommerce?
Migumisiro yeCOVID-19 pane zvemagetsi zvekutengeserana
Ungave sei nemubhadharo muchitoro chepamhepo kana commerce?